allsanaag.com - Warar Kooban oo Soomaliya Ku Saabsan
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3205	Days	04	Hours	52	Minutes	25	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Warar Kooban oo Soomaliya Ku Saabsan
Written by Shanle	Hargaysa: Maxkamada Danbiyada Dagaalka ee Caalamiga ah ayaa loo gudbiyay dacwad ka dhan ah Madaxweyne maamulka Hargaysa Siilaanyo; dacwadan ayaa ku aadan xasuuqyo iyo dagaalo uu ka geestay meelo badan oo kamid ah gobolka. Xukuumada ayaa lagu eedeeyay iney tahay mida sameenaysa falalka argagixinta, dilka iyo qaxinta oo laga sameeyay gobolka Sool, Sanaag iyo Awdal. Dacwada ayaa waxaa gudbinteeda qeeb weyn ka qaatay dad ka soo horjeeda siyaasada Siilaanyo.
Dhadhaab: Xeryaha dhadhaab ayaa waxaa la sheegay in qaxootigii degganaa ay bilaabeen iney dib ugu noqdaan Soomaaliya. Maalin walba waxaa ka gudba xadka 100 qof. Dadka ayaa iyagu iskood u go’aansaday iney deegaanadoodii ay dib ugu noqonayaan, maadaama xeryahii amaankoodu uu iska xumaaday. Xeryaha qaxootiga ayaa iyana waxaa ka dhaca kufsi loo geesto dumarka taas oo cid wax ka qabaneesaana aysan jirin.
France: Dawlada Faransiiska ayaa ku deeqday hal million oo euro oo u dhiganta hal milyan iyo seddex boqol oo kun oo dollar $1 300,000. Lacagtana ayaa loogu talagalay dadka ku dhibaateesan Koonfurta Soomaaliya kuwaas oo guryahoodii laga barakiciyay.
Holland: dalka Holland ayaa joojisay qaadka ka iman jiray dalka Kenya bishan Janaayo 5teedii. Jaadka ayaa waxa uu dhib weyn ku hayaa dadka Soomaalida meel kasta oo ay joogaan hadey nqon laheed Soomaaliya iyo Qurbaha labadaba. Dad badan ayaa iyagu nolosha ka dhacay, meesha qoysas badana ay ku burbureen maadaama niman badan ay dayaceen reerkoodii . Dad badan ayaa soo dhaweeyay arrintaas meesha ay ka naxeen dadka iyagu ka ganacsan jiray. Qaadka ayaa hada waxaa durba la bilaabay in laga soo geliyo dhinacaa iyo Ingiriiska isagoo qiimahiisuna uu kor u kacay gudaha Holland.